Uyakha njani iwebhusayithi emva kokuthenga igama ledomeyini? - Step By Step Guide
Uyakha njani iwebhusayithi emva kokuthenga igama ledomeyini?
Uninzi lunokuba nenkolelo yokuba kuya kufuneka uqeshe umakhi wewebhusayithi ukwakha iwebhusayithi kodwa inyani kukuba kule mihla itekhnoloji iqhubele phambili ngokwaneleyo, ungayenza ngokwakho ngaphandle kolwazi lobuchwephesha.
Ufuna umakhi olungileyo wewebhusayithi ukwakha iwebhusayithi ngokweemfuno zakho. Amanyathelo alula kakhulu. Ndicacisa isikhokelo esisisombululo esigqibeleleyo sokusombulula ingxaki yakho yokudala iwebhusayithi epheleleyo.
Emva kokuthenga igama lesizinda, udinga iqonga lokusingatha kuqala. Indawo yokubamba egcina umxholo wewebhusayithi yakho. Okwesibini, Ukwakha iwebhusayithi, ufuna umakhi wewebhusayithi. Okokugqibela, intwana yengqondo yoyilo.
Iindleko zokwakha iwebhusayithi
Abakhi beWebhusayithi abadumileyo
Ukwakha iwebhusayithi enegama ledomain
Ukuseta i-domain kunye nokusingathwa
Kodwa ngaphambi koko, Unokufuna ukwazi ukuba kubiza malini ukwakha iwebhusayithi ebonakala ngathi yeyobuchwephesha. Impendulo ixhomekeke ngokupheleleyo kuhlobo luni lwewebhusayithi oyifunayo. Iwebhusayithi yeshishini elincinci iqala ngendleko ezingaphantsi kune $100 minyaka le kwaye iya amawaka aliqela eedola ngonyaka neemfuno zobungcali ezigqithileyo.
Sincoma ngokwethu abathengi bethu ukuba baqale iwebhusayithi notyalo-mali oluncinci njengoko ukhula kunye neshishini lakho, ungongeza izinto eziphambili.
Nazi uninzi lwabakhi bewebhusayithi ngokuqinisekileyo oko kukunceda ukuba useke iwebhusayithi ekhangeleka ngobuchule. Apha ngezantsi ndidwelise ezona zibalaseleyo.
Iphupha leWebhusayithi eyiphupha
Umakhi weWebhusayithi yeGoDaddy
Uninzi lwaba bakhi bewebhusayithi banesibonelelo sokwakha iwebhusayithi ngokurhuqa ngokulula kwaye ulahle. Okokugqibela kuya kufuneka utshatise iimfuno zakho kunye neenjongo kunye nendawo abazisa yona.
Ungasithatha isibonelelo sezicwangciso zabo zesilingo sasimahla kwaye ukuba zikulungele ke kuya kufuneka uqhubeke ngokuthatha isicwangciso sabo samaxabiso senyanga okanye ngonyaka.
Kuya kufuneka ubeke ukukhula kwakho phambili, ngokuhamba kwexesha– Ngaba uya kuba nakho ukongeza uhlaziyo ngakumbi, Ngaba ikuvumela ukuba uhlaziye amanqaku owadingayo, Ngaba inenkxaso yabathengi kunye neempawu eziphathwayo. Ngaba ikuvumela ukuba uhambise idatha ukusuka kwelinye iqonga ukuya kwelinye ngaphandle kwelahleko?
Kuzo zonke ezi zinto zikhankanywe apha ngasentla abakhi bewebhusayithi, ngokwethu sihlala sikhetha iqonga lokuzibamba. Umakhi wewebhusayithi yeWordPress ngumthombo ovulekileyo, simahla, kwaye iza namawaka eetemplate ezakhiwe kunye nezandiso. Kulungile kakhulu.
Engaphezulu kwe 41 % Abasebenzisi be-intanethi basebenzisa amaqonga eWindowsPress. Sisoloko silungiselela iiwebhusayithi zabaxhasi kwiWordPress. Inokuguquguquka okukhulu kwaye iphantse ihambelane nezinye izixhobo zomntu wesithathu.
Ukusuka kwindawo yokujonga ye-SEO, sibone imizekelo emininzi echaza ukuba akukho mntu unokubetha iWindowsPress. I-SEO konke malunga nokufumana isikhundla kwiinjini zokukhangela njengeGoogle Bing njl. I-WordPress inokuguquguquka ngakumbi. Iimpawu ze-SEO zinceda uGoogle nabanye ukuba baqonde umxholo wakho. Ukusebenza kweinjini yokukhangela konke malunga nokwenza umxholo wakho ngendlela yokuba ubekwisikhundla sokuqala. Ngaphandle kwale, Imiba ye-SEO yobuchwephesha nayo. Unokufumana ngokulula amawaka eevidiyo ezikwi-intanethi ezisombulula umbuzo wakho ngokubhekisele kwiWordPress ngokuthelekisa.
Ukwakha iwebhusayithi kuhlala kumnandi. Ukuba ujongene nayo nayiphi na ingxaki ngelixa usenza iwebhusayithi ungatyelela iphepha lethu lokunxibelelana ukunxibelelana nge-imeyile.
Ukusetyenziswa kuhlala kungena kwiimpazamo ngokukhetha iqonga elingahambelaniyo. Kulungile, enkosi ngethamsanqa ulapha nathi. I-WordPress luhlobo lweqonga elinamawaka eetemplate ezichazwe kwangaphambili ezahlukeneyo zenjongo. Uyilo olunezongezo ezikuvumela ukuba wenze uyilo lwewebhusayithi oligqibileyo.
Ewe, I-WordPress isimahla, ungayikhuphela kwiwebhusayithi esemthethweni. Ngoku umbuzo ophakama apho i-WordPress ivela khona ukuba isimahla? Impendulo uhlawuliswa ngokuthenga kwakho indawo yokubamba kunye ne-domain.
Nazi ezinye zezona zinto zibalaseleyo zokubonelela namhlanje ekufuneka uzijongile.
Ababoneleli ababalaseleyo beWebhusayithi yeWordPress
I-BlueHost yeyona ilungileyo kwi-Starter Wordpress Hosting
Jonga iSipho esitsha
50% cPanel Ukusingathwa kweGoDaddy!
Ukhetho olufikelelekayo lweHostgator (Simahla .COM Domain & Ixhomekeke ku 50% Cinyiwe kuNdwendwe)
(Sebenzisa ikhowudi:- ILANGA)
Inketho yokubamba ekwabelwana ngayo ngeHostinger ngexabiso eliphantsi (Ixhomekeke ku 84% Izicwangciso zokubamba ekwabelwana ngazo ngePrimiyamu )
(Sebenzisa ikhowudi:- INKQUBO YOKUQALA )
Igama Iixabiso zexabiso eliphantsi: Gcina ukuya kuthi ga 86% KwiNdawo & Isixa sokubamba ekwabelwana ngaso
Ngethamsanqa, kule mihla, Inkonzo yokubamba iBluehost ukubonelela ngezinto ezininzi nge 60% isaphulelo ngelixa ezinye iinkampani zinokukuhlawulisa ngokongeza kwinto nganye. Ayisiyiyo le kuphela kodwa ufumana isizinda sasimahla esiphantse ukuxabise ngeenxa zonke 14 ukuya 15 Iidola ngonyaka.
ungandwendwela eli khonkco ukuze ufumane Ukunikezelwa kwangoku.
Ayisiyo nkampani intsha kwimarike oko ikhonza umthengi ukusukela 2005. Ngaphandle kwale, ukuba ujamelana naluphi na uhlobo lobunzima ekumiseni iwebhusayithi yakho uzive ukhululekile ukunxibelelana nathi. Sisoloko sikuwe kwaye siyakuvuyela ukunceda.
Xa undwendwela i-Bluehost iwebhusayithi esemthethweni, ngokulandelayo kufuneka ucofe “qalisa ngoku” ukuqhubeka nokwakha iwebhusayithi.
Oku kuya kukuzisa kwiphepha elilandelayo ngesicwangciso samaxabiso esahlukileyo. Abantu kunye neenkampani bakhetha isicwangciso ngokokusekwa kwabo kunye nohlobo lwemfuno. Siyacebisa ukuba uqale ngesicwangciso esisiseko. Kungenxa yokuba ukwinqanaba lokuqala, njengoko ishishini lakho lisanda ukuya kwinqanaba elilandelayo, inani labatyeleli kwiwebhusayithi yakho, emva koko ushukuma ukonyusa isicwangciso.
Nokuba kunini xa ndisakha iwebhusayithi yam kumthengi ndihlala ndicebisa ukuba bathenge isicwangciso esisisiseko. Xa ndazisa iwebhusayithi yabo, baqala ukufumana iindwendwe, phantse xa unqumla 25000 iindwendwe ngenyanga. Emva koko nditshintshela kwisicwangciso esiphuculweyo.
Endaweni yoko, Ukuba ubala lonke ixabiso lokuqala ngesicwangciso esibiza kakhulu, uziva ngathi ungaphezulu kwamandla akho. Kwaye ngokobuqu, asikucebisi.
Sinamava amaninzi ngeenkonzo ezinje. Besiziphethe zonke ezi zinto okokugqibela 10 iminyaka. Sikunika nje ingcebiso yokwenyani.
Emveni kwalonto, baya kukucela ukuba ukhethe igama lesizinda elifanelekileyo. Apha kuya kufuneka unamathele .com. kufanele ukuba ibe ngokwegama lakho leshishini elinopelo oluchanekileyo. Njengoko ukhula, abathengi bakho okanye abasebenzisi baqaphela ngokulula uphawu lwakho kunye negama lesizinda.
Inyathelo elilandelayo liza kukubuza iinkcukacha ezisisiseko njenge-imeyile, igama, Ifani, njl. Ukuzalisa iinkcukacha, inyathelo elilandelayo uza kubona iindleko ezongezelelekileyo ezinje ukhuseleko lwewebhusayithi, ukukhuselwa kwesizinda, ugcino lwewebhu. Ungazithenga ezi zibonelelo zongezelelweyo kamva xa ufuna.
Xa ndiqala iwebhusayithi yam yomthengi, Andizange ndizithenge kwangoko. Emva kwenyanga okanye ezimbini xa umxholo wewebhusayithi wonele, ke ngokuqinisekileyo ndithenga indawo yokugcina kunye nenqaku lokhuseleko.
Emva koko ukhetho lokuhlawula, emva kokuthenga i-domain kunye nokusingathwa. Uxanduva olulandelayo kukufaka iWindowsPress kwiwebhusayithi yakho ngaphambi kokuba uqhubeke nokwakha.
Xa ubhalisa ngeakhawunti yakho, Baza kubonelela ngoncedo lokucofa okukodwa kubasebenzisi abangafundanga. Abasebenzisi abafuna ukufaka iwebhusayithi yabo bebodwa ngaphandle koncedo lomntu wesithathu.
Xa yonke into izakwenziwa nje “uhlobo lwendawo yakho yokuhlala.com/wp-admin/” kwisikhangeli sewebhu oya kuthumela kwiphepha lokungena.
Ngenisa iziqinisekiso zakho zokungena uza kubona ujongano lweWordPress.
Uyilo lweWordPress kwaye zisingathwa yimixholo echazwe kwangaphambili. Eyokuqala ayisiyonto inomtsalane kwaye inomdla. Ungayitshintsha ngokulula ngokunqakraza kwinkangeleko –>Izihloko.
Uza kubona umfanekiso-skrini ofanayo apha ngezantsi.
Ukucofa kunye nokutsha uya kuvavanya 1000+ imixholo emnandi yeWordPress. Apha icebo linye kukufaka umxholo ngokwemfuno okanye nditsho injongo. Isikhokelo somxholo weWordPress sinemixholo eyahlukeneyo yeshishini. Ungazihluza ngokokuthandwa kwazo.
Esi sikhokelo, Ndilapha ukuya kufaka umxholo weWordPress ye-WP enezinto ezininzi. Ineetemplate esele zilungile. Ngokwayo ungazifaka ngonqakrazo olunye. Kwaye wenze oku kulungiselelwa ngokweemfuno zakho.
Ukubhala umxholo kwiwebhusayithi yakho, ungasebenzisa iposti kunye nendawo yephepha. Izithuba ngokuyintloko zibhalela umxholo webhlog rhoqo kwaye amaphepha ngokuqinisekileyo asetyenziselwa amaphepha anjengathi unxibelelana nephepha, umthetho wabucala, isikhanyeli, ekhaya, njl.
Ukwakha iwebhusayithi emva kokuthenga i-domain ayinzima ngokupheleleyo ngokungafaniyo neentsuku zokuqala. Kule mihla, uninzi lwabakhi bewebhusayithi bakhile ngaphambili kunye nolungiselelo lokucwangcisa nokuphumeza iiwebhusayithi ngokudonsa ngokulula nangokulahla. Eyona nto ibaluleke kakhulu kukuguquguquka, ukuhambelana nabanye kwimeko yotshintsho olukhulu. Ngaphandle kwale, Ngaba ineevidiyo ezininzi eziluncedo ekusombululeni imibuzo ngokwethu. Sichaze elona khetho lilungileyo eligcina ixesha elide kwaye linayo yonke into oyifunayo.
Yimalini ongayenza kwiBhlog yeWordPress
Ngaba Kunzima Ukwenza Imali Ngokudityaniswa Kwentengiso?
Previous PostXa uthenga i-Domain kwiGoDaddy? Ngaba ungumnikazi wayo
Next PostUyenza njani iwebhusayithi yakho yeBhlog
Ukuba ndithenga i-domain kwiGoDaddy, Kuya kufuneka ndibambe nazo?
Ndiyisebenzisa njani i-domain yam endiyithengileyo kwenye indawo
Ngaba ndingalithenga igama lesizinda kwaye ndilisebenzise naphina